ရေကြီးမှု | ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
မိုး၏အဆိုးရွားဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုများထဲမှတစ်ခုမှာ ရေကြီးမှုလမ်းခရီး၌ရှိသမျှတို့ကိုရုပ်သိမ်း။ ၊ သစ်ပင်များ၊ နေအိမ်များ၊ လမ်းများနှင့်ရှည်လျားသောစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၎င်းသဘာဝဖြစ်စဉ်သည်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်အများဆုံးကြောက်ရွံ့မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီနေရာမှာမင်းတွေ့လိမ့်မယ် ရေကြီးမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအရာအားလုံး ဒါကတခါတလေလူ ဦး ရေနဲ့မြို့ကြီးတွေအားလုံးကိုအကျိုးသက်ရောက်တယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဤစတိုင်၏ဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးနာရီ။ သင့်အားသတင်းအချက်အလက်၊ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများနှင့်ပျောက်ဆုံးနေသောပုဂ္ဂိုလ်များအားသင်၏ပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည့်အရာအားလုံးအားသင့်အားအသိပေးရန်။
por ဂျာမန် Portillo လွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်း .
ရေလွှမ်းမိုးမှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်ဖြစ်စဉ်များဖြစ်သည်။ သိပ္ပံဂျာနယ်တွင်ထုတ်ဝေသောလေ့လာမှုတစ်ခုအရ ...
ကျနော်တို့ဆူနာမီအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြားဖူးတယ်။ ဤရွေ့ကားငလျင်လှိုင်းများမှာကြီးမားသောလှိုင်းများမှဖြစ်ပေါ်လာသော ...
Murcia နှင့် Alicante တွင်မုန်တိုင်းကြောင့်ပျက်စီးမှုများနှင့်သေဆုံးမှုနှစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်
por ဂျာမန် Portillo လွန်ခဲ့တဲ့5အနှစ် .
အိုင်ဘာရီယန်ကျွန်းဆွယ်နှင့် Balearic ကျွန်းများ၏အရှေ့တောင်ခြမ်းလုံးကိုထိခိုက်သောမိုးနှင့်လေ ...
ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယို - စပိန်နိုင်ငံတွင်မိုးရေချိန်မုန်တိုင်းသည်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်
မနေ့ကမမေ့နိုင်တဲ့နေ့တစ်နေ့ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် 120l / m2 ၏အရှေ့တောင်ခြမ်းရှိလမ်းများစွာသို့ ...
မကြာသေးမီရက်များအတွင်းမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် Andalusia သည်ရေကြီးမှုကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ...
မကြာသေးမီရက်များအတွင်းကမိုးလေ ၀ သခန့်မှန်းချက်များအရစပိန်ပြည်နယ် ၁၁ ခုကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံများကသတိပေးလိုက်သည်။
por မော်နီကာဆန် လွန်ခဲ့တဲ့7အနှစ် .
ရေကြီးတဲ့နေရာကိုသင်ရောက်သွားနိုင်တယ်။ ၂၀၁၃ နိုဝင်ဘာလမှာကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့နေရာမှာ ...